Ka soo saar xogta faylka qoraalka leh PHP | Abuurista khadka tooska ah
Ka soo saar xogta feyl qoraal leh PHP
Sida aan wada ogsoonahay, mid ka mid ah ujeedooyinka ugu waaweyn ee teknolojiyadda iyo xisaabinta ayaa ah raaxaysi, xaaladdanna waan ka shaqeyn doonnaa ku habboonaanta noo ah barnaamijyada.
Marar badan, tallaabada ugu wanaagsan ee amniga ayaa ah in la sameeyo wax kasta oo suurtagal ah si loo hubiyo in booqdaha runti ma ogid waxaad sameyneysoSidan ayaan uga fogaan doonnaa dhammaan noocyada u nuglaanta guud ee shabakadda. Sidan oo kale, waxaan kuu soo jeedinayaa inaadan raacin tilmaamaha uu qof kastaa raaco markii la samaynayo bog, laakiin inaad adigu soo jeediso shaqooyinka kala duwan.
Mid ka mid ah qaybaha ugu jilicsan ee shabakad kasta waa keydka xogta, maadaama dhammaan xogta loo baahan yahay in la keydiyo, kiisaska ugu badan, lagu keydin doono. Si loo helo macluumaadka waxaan u baahanahay macluumaadka soo socda:
Badanaa macluumaadkaan waxaa lagu lifaaqaa isla feylka fuliya shaqada isku xirka keydka:
Si kastaba ha noqotee, sida had iyo jeer, waxaa jira qaab kale oo wax loo sameeyo, waxaan ku keydin karnaa xogtan sirta ah feyl ka duwan kan shaqada qabanaya, ka dibna xaddid rukhsadaha faylkaas.
Tan awgeed waxaan u adeegsan doonnaa shaqada rtrim, shaqada xog ka soo saar faylka qoraalka guud. .Txt waa inuu ka koobnaadaa hal xog sadar kasta, wax sidan oo kale ah:
Oo waxaan ka soo saari doonnaa xogta dambe markii dambe, feyl ka dhigaya isku xirnaanta:
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Technologies » PHP » Ka soo saar xogta feyl qoraal leh PHP